मनोरञ्जन Archives – Page3of5– Mukundasen Television
‘तिमी विना’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
गायक शरद ढुंगेलको पहिलो एल्बम ‘प्रतिध्वनी’मा ५ वटा गीत समावेश छ । यो एल्बमको काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा गीतकार डाक्टर कृष्णहरि बरालले विमोचन गरे । एल्बममा समावेश ५ वटा गीत मध्ये २ वटा गीतको भिडियो पनि तयार भैसकेको छ । जसमध्ये ‘तिमी विना’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो एल्बममा समावेश सबै गीतमा हेमन्त ढुंगेलको शब्द छ । सार्वजनिक भएको भिडियोमा मोडलद्धय रञ्जन रिमाल र नम्रता योगीले...
र्फिर्केको नया वर्ष रमाइलो साझ
बिबेक भण्डारी २ , नया वर्ष २०७४ सालको अवसरमा र्फिर्के क्लव रजहरको आयोजनामा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । शुक्रवार नया वर्षको अवसर पारी क्लवले विविध सास्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका हो । कार्यक्रमको अवसरमा नवलपुरका केरा व्यवशायि एज्ञप्रसाद सुबेदीलाई क्लवले सम्मान गरेको थियो । भेषराज पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा स्थानिय कलाकारहरुले विविध सास्कृतिक प्रस्तुत देखाएका थिए । जनकल्याण सामाजिक विकास केन्द्र फिर्केका अध्यक्ष अजय रिजालको अध्यक्षतामा आयोजना भएको...
अमेरीकामा मेड इन नेपाल
फिल्मीखबर ८, अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’ नामक फिल्मको सुटिङ गरिएको छ । ईश्वर थापाले निर्देशन गरेको उक्त फिल्मको हाल सम्पादनको कार्य भईरहेको छ । नन्दिता केसी, इसान ढकाल, प्रवेश उप्रेती, प्रियंका एर, अन्जली लामा, राजेश गुरुङ, प्रेम गुरुङ, सुरेन्द्र बास्तोला, आर जेसी, अमेरिकन कलाकार मे फर्दिनंदको अभिनय रहेको फिल्मको पटकथा संवाद सुरेन्द्र नकर्मीको रहेको छ । बाबु बोगटी र ओम कर्माचार्यले संगीत दिएको यस फिल्मका...
नवलपरासीमा सि.के. राउतका २२ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ
वृजराज कुशवाहा कार्तिक ७ गते , नवलपरासीमा सि.के. राउतका २२ जना कार्यकर्तालाई तालिम संचालन गरिरहेको अवस्थामा नवलपरासी प्रहरीले आइतवार विहान परासीबाट पक्राउ गरेको छ । स्वतन्त्र मधेश अभियानको नाममा मधेश लिडरसिप तालिम संचालन गरिरहेका २२ जनालाई आइतवार विहान परासी स्थित होटल रोयल परासीबाट पक्राउ गरिएको एस.पी. राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।उहाले उनीहरुका कारणले अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा स्वतन्त्र मधेश अभियान के...
नवलपुर आउदा सिजी मन्दिर नपस्ने कम नै होलान
बिबेक भण्डारी २९ दुम्कौली, नवलपरासीको देवचुलिनगरपालिका दुम्कौलिमा रहेको चौधरी उघोग ग्राम संगै रहेको सिजी मन्दिर यतिबेला नवलपुर आउने हरेकको गन्तव्यको स्थल बनेको छ । हामिले सिजी मन्दिर भनेर चिने पनि बास्तवमा सो मन्दिर श्री काञ्ची शंकरा सदाशिव लिंगम्को नामले स्थापना गरिएको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । हेर्दै मनमोहक देखिने मन्दिरको निर्माण सुरु भएको बाह्र वर्ष पुगिसकेको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्ग देखि उत्तर तर्फ रहेको यस मन्दिरमा...
‘ब्रासलेट’ मौलकितामा आधारित चलचित्र तीजको कोसेली हो ’ – निर्देशक शर्मा
राजेन्द्र आचार्य चितवन, १२ भदौं । नेपाली चलचित्र ‘ब्रासलेट’ समाजमा भैरहेको घटना र मौलकितामा आधारित रहेको त्यसका निर्माता तथा निर्देशकले बताएका छन् । चितवनमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी चलचित्र ब्रासलेटका निर्माता केशव भट्टराईले सामान्यतया भैरहेको घटनालाई जोडेर चलचित्र बनाएको बताउनुभयो । चलचित्रको प्रचारप्रसारमा लागेको ब्रासलेट टिमले आज चितवनका पत्रकराहरु माझ चितवनका दर्शकमाथि धेरै नै भरोसा रहेको बताएका छन् । तीजका दर्शकलाई केन्द्रित गरेर भदौ १७ बाट चलचित्र प्रदर्शन गर्न लागिएको...
प्रियंका लाइ चिन्ने हो माला हेर्नुस
श्रावण ३०, प्रियंका कार्की पछिल्लो समय रूचाईएकी अभिनेत्री हुन् । अभिनय र काम गर्ने शैलीले सबैको मन जित्दै गएकी प्रियंकाका यो बर्ष आधा दर्जनभन्दा बढि फिल्म रिलिज भए । सफलता ? शून्य जस्तै छ । उनको व्यस्तता भने ज्यादै छ । फिल्म सफल हुनु र नहुनुसँग प्रियंकाको सम्बन्ध हुँदैन । ‘आफूले पाएको भूमिकामा न्याय गर्न सक्छु, फिल्म हिट र फ्लप हुनुको ग्यारेन्टी म लिन सक्दिन’, प्रियंकाले भनिन्, ‘म आफूले...
डि सिने अवार्डः कुन कुन चलचित्र उत्कृष्ट (सुचीसहित)
काठमाडौं 30 ,पोखरामा शनिबार सम्पन्न डि सिने अवार्डमा पछिल्लो बर्ष रिलिज फिल्म ‘क्लासिक’ले उत्कृष्टको अवार्ड जितेको छ भने सोहि फिल्मबाट अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेका छन् । तर उत्कृष्ट निर्देशक तर्फबाट पशुपतिप्रसादबाट दिपेन्द्र के खनालले अवार्ड जिते । निर्देशकले नै बनाएको फिल्मले नपाउनु तर निर्देशक भने उत्कृष्ट ठहरिनुले विवाद निम्त्याउने निश्चित छ । यस्तै नव अभिनेतातर्फ नाई नभन्नु ल ४ बाट पल शाहले...
कति कमायो ‘जय परशुराम’ले दुई दिनमा ? (वक्सअफिस)
काठमाण्डौ ३०, शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जय परशुराम’ले सुखद ओपनिङ गरेको छ । वितरक तथा हल सञ्चालकहरुबाट फिल्मीखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार फिल्मले दुई दिनमा देशभरबाट ४५ लाखको विजनेस गरेको छ । रिलिज हुने नहुनेबारेको अनेकन प्रचारले फिल्मको विजनेसमा केहि असर पारेपनि निर्माण टिमले प्राप्त विजनेसबाट सन्तुष्ट रहेको बताएको छ । राजधानीमा फिल्मले पहिलो दिन ८ लाख र दोश्रो दिन १७ लाखको विजनेस गरेको वितरण श्रोत बताउँछ । त्यस्तै मोफसलमा...
ज्योती मगरको धोकोलाई यसरी पुरा गरिदिए दुर्गेसले
चितवन– लोकदोहारी तर्फको हट मोडेलको रुपमा चिनिकी गायिका एवंम मोडेल हुन् ज्योती मगर । तिनै ज्योतीलाई आफ्नो जोवन सुम्पन विभिन्न इच्चाहरु जाहेर गर्ने गरेकी छिन् । अब उनको इच्छा त्यसै मरेर जाने छैन् । गायिका एवंम मोडेल ज्योतीको इच्छा अब अर्का मोडेल दुर्गेसले पुरा गरिदिएका छन् । चर्चित गीतकार एवंम निर्देशक शंकर अधिकारी ‘घायल’को गीत र निर्देशनमा बनेको एक म्युजिक भिडियोमा ज्योती मगर र दुर्गेस थापाले रोमान्स गरेका छन् । उनीहरु...